"मृत्यु को निलो पर्दा," वा बीएसओडी विशेषज्ञहरु भनिन्छ रूपमा -, कम्प्युटर को एक सुरक्षा प्रतिक्रिया संभावित विफलताका वा क्षति अगाडि कामको प्रणाली निलंबित। केही अवस्थामा BlueScreen (त्रुटि) चालक को समस्या संग जडान देखा पर्छ। यस्तो अवस्थामा, पूर्ण यसलाई बस पुनः सुरु गर्न मद्दत गर्दछ। कुनै थप कार्य र विशेष कार्यक्रम गर्दा तर अक्सर त्यहाँ परिस्थिति हो समस्या समाधान गर्न असम्भव छ। एक यस्तो लोकप्रिय आवेदन छलफल BlueScreen दर्शक, थप उल्लेख हुनेछ जो बारेमा।
यो एक "नीलो पर्दा" भनेर बुझ्ने गरिन्छ - यो रूपमा कुरा खराब होइन, तर यो जब यो देखिन्छ धेरै निराशा छ। यसलाई हटाउन, तपाईं कम्प्युटर प्रविधिको केही ज्ञान, पाठ्यक्रम, यसको कारण थाहा छ र हुनुपर्छ।
घटना नाम (समस्या) - BlueScreen। को कारण
कम्प्युटरमा धेरै फरक यो समस्या को कारण: भाइरस बाट र अंतर बिजुली सञ्चालन प्रणाली फाइलहरू र सफ्टवेयर को गलत स्थापना हटाउन। यो समस्या सामना गर्न, सबै भन्दा अवस्थामा यो सम्भव, घर छोडेर बिना छ। तर यो हुन लागि कम्तिमा लगभग को "नीलो पर्दा" गर्न नेतृत्व भन्ने कारणहरू निर्धारण। निम्नानुसार यी कारणहरू सारांशित गर्न सकिन्छ:
को Motherboard वा भिडियो कार्ड को गंभीर तात्दै;
भिडियो कार्ड overclock गर्न प्रयास;
स्मृति मा खलबल;
शक्ति आपूर्ति पावर को कमी;
सबैभन्दा कारण "नीलो पर्दा" भिडियो कार्ड कम्प्युटर छ। उदाहरणका लागि, यस्तो साधारण समस्या BlueScreen (कोड 1049) को रूप मा, ग्राफिक्स कार्ड उल्लङ्घनको नबुझाउन।
समस्या देखा निदान गर्न
"नीलो पर्दा" समस्या को उपस्थिति को लागि सबै भन्दा साधारण कारण विस्थापन वा आफ्नो कम्प्युटरमा नयाँ घटक स्थापना गर्न हाल कार्यहरू छन्। यो त त्यहाँ नयाँ घटक लागि कुनै चालक छन् वा "टेढो" छन् स्थापित भन्ने हो।
कहिलेकाहीं BlueScreen घटना कम्प्युटर को आन्तरिक भागहरु को Motherboard वा अन्य नोड्स आफ्नो ठाउँमा गरिबी जडित भन्ने तथ्यलाई कारण हुन्छ। सबै विवरण जाँच गर्न, तपाईं खोल्न पर्छ प्रणाली एकाइ र सही जडान लागि केबल, स्मृति र ग्राफिक्स कार्ड निरीक्षण। एक ल्यापटप गर्न परीक्षण कठिन यस्तो। हुन सक्छ कि मात्र कुरा - खोल्न फिर्ता आवरण nouta हार्ड ड्राइभ जडानहरू र स्मृति जाँच गर्न।
किनभने बलियो तात्दै ग्राफिक्स कार्ड र CPU को प्राय सिस्टम असफल पनि उत्पन्न हुन सक्छ। कि प्रोसेसर र ग्राफिक्स कार्ड पत्ता लगाउन, तपाईं मेनु "BIOS", जो आन्तरिक संकेत गरम करना देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर को तापमान, वा आन्तरिक घटक र सम्मेलन को तापमान उपाय एक विशेष कार्यक्रम प्रयोग गर्नुहोस्।
घटना समस्या BlueScreen नाम प्रदर्शन गर्दछ, अर्को कारण - स्मृति पट्टी यस विफलता। राम सञ्चालन परीक्षण गर्न सकिन्छ "Memtest" जो मिनेटमा सिस्टम मा हुन्छ कि वा विफलता रैम कारण, स्मृति र प्रदर्शन स्कैन कार्यक्रम।
BlueScreen समस्या पनि कारण हार्ड डिस्क को उल्लङ्घनको उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो विकल्प जाँच गर्न, तपाईं जो "उपकरण" ट्याब मा "windose" पाउन सकिन्छ हार्ड डिस्क वा chkdsk सिस्टम समारोह त्रुटिहरू र असफलता को उन्मूलन लागि विशेष कार्यक्रम फाइदा लिन सक्छ। जब तपाईं चलान हुनेछ तपाईंको कम्प्युटर जाँच त्रुटिहरू लागि।
र अन्तिम साधारण भेद - भाइरसका लागि आफ्नो कम्प्युटर जाँच गर्नुहोस्। यो गर्न, जस्तै "Avast", "डाक्टर वेब", "नर्टन", "Kaspersky" र अरूलाई रूपमा लोकप्रिय विरोधी-भाइरस कार्यक्रम फिट।
यो अझै पनि BlueScreen (1049), एउटा त्रुटि देखिन्छ भने, कसरी मिलाउने?
यो "नीलो पर्दा" को प्रभाव लागि अग्रणी, प्रणाली मा असफलता, माथि कारण भन्दा बढी गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्ने हुन्छ। तसर्थ, यो त्रुटि सही को माध्यम थप कट्टरपंथी लागू गर्नुपर्छ।
यदि को माथि विधिहरू सबै रिकभरी मदत गरेका छैनन्, र निरन्तर सुरुवातमा वा कम्प्युटर सञ्चालन बेला स्क्रिनमा "मृत्युको स्क्रिन" देखिन्छ, सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका अवस्था काम मा सबै पुनर्स्थापना - रिसेट गर्न, आधारभूत कन्फिगरेसन र मापदण्डहरू, अर्थात् गर्न पीसी फर्कन छ .. प्रणाली। सहित आफ्नो सबै कम्प्युटर सिस्टम समस्या मात्र प्रभावकारी तरिका BlueScreen (1049) द्वारा - प्रोग्रामर अक्सर छ कि मजाक। साँच्चै, यो विधि सिस्टम असफल, चूक वा भाइरल संक्रमण सम्बन्धित लगभग सबै कम्प्युटर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। तर, यो विकल्प गम्भीर drawback छ - यो reinstallation "windose" बेला हार्ड डिस्क मा भण्डारण गरिएका सबै जानकारी हानि छ। तसर्थ, यसलाई आफ्नो कम्प्युटर पुनर्स्थापना सबैभन्दा चरम विधि हो।
विशिष्ट रिकभरी प्रोग्राम - त्यहाँ प्रयोगकर्ता जस्तै अपरेटिङ सिस्टम पुनर्स्थापित रूपमा कट्टरपंथी विधिहरू, गर्न Resort गर्न अनुमति दिन सक्छ जो बीएसओडी उन्मूलन अर्को तरिका छ।
सहायक कार्यक्रम को प्रयोग
सबै को पहिलो म deservedly तपाईं कम्प्युटर वा तय सिस्टम त्रुटिहरू सफा गर्न आवश्यक जब, कम्प्युटर प्रयोगकर्ता बीच पहिलो रैंकों जो BlueScreen दर्शक, यस कार्यक्रम कल गर्न चाहन्छु। मा निःशुल्क रूसी यो कार्यक्रम डाउनलोड र आफ्नो उपकरणमा स्थापना गर्न सकिन्छ। यसलाई अन्य यस्तै कार्यक्रम तुलनामा लाभ र लाभ को एक नम्बर छ:
स्क्यान "नीलो पर्दा" गर्न नेतृत्व जो एक प्रणाली असफलता, समयमा सिर्जना फाइलहरू minidump;
यो जानकारी तालिकामा विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दछ;
यो मिति / समस्या को घटना को समय देखाउँछ;
यो त्रुटि कोड देखाउँछ;
नाम फाइलहरू minidump स्क्रिनमा प्रदर्शित;
यो सिस्टम को गिरावट पैदा गर्न सक्छ जो मोड्युलहरू र ड्राइभर, बारे जानकारी प्रदान गर्दछ।
आवेदन फाइदाहरू दर्शक BlueScreen
साथै, कार्यक्रम निम्न लाभ छ:
यो निःशुल्क छ;
यो आफ्नो पीसी मा स्थापित आवश्यकता छैन;
फाइल फोल्डर मा दरार छ;
सजिलो र प्रयोग गर्न सुविधाजनक।
कार्य को कार्यक्रम को सिद्धान्त
एक प्रणाली असफलता को घटना मा कार्यक्रम कम्प्युटर मा यस्तो उल्लंघन कारण सक्ने फाइलहरू र ड्राइभर लागि खोजी। यी को खोज मा वा ड्राइभर र यसको स्थान को विवरण संग तालिका रूपमा रिपोर्ट सिर्जना गर्छ।
पनि कार्यक्रम प्रणाली को पतन को असली कारण फेला पार्न र यसको घटना मिति संग समस्या को पूर्ण विवरण प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ।
माथिको कार्यक्रम साथै BlueScreen (त्रुटि) निदान र यस्तो WhoCrashed र WhatIsHang रूपमा आवेदन गर्न सकिन्छ। यो अपरेटिङ सिस्टम दुर्घटनामा कारण खराब चालक पहिचान निःशुल्क कार्यक्रम छ।
कम्प्युटर को "निलो पर्दा" - कृपया मद्दत
धेरै मानिसहरू, पीसी को "मृत्यु" को रूपमा यो समस्या उल्लेख गर्दा वास्तवमा, "मृत्युको स्क्रिन" - प्रयोगकर्ता मदतको लागि एक कराउँदै। एक व्यक्ति केही दुख्छ छ, त्यो लक्षण र यति मा कुरा गर्न, आफ्नो परिवार डाक्टर वा पीडा गर्न गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ। र एक चतुर, तर हालसम्म मौन उपकरण के, आफ्नो "शरीर" त्यहाँ एक गम्भीर समस्या छ, हामी BlueScreen (त्रुटि) कल? हामी मात्र केही अंक समावेश, मनिटर "नीलो पर्दा" सेतो अक्षर र प्रतीकहरू समस्या को एक संक्षिप्त विवरण संग लिखित जो मा हुने "उजुरी" कम्प्युटर प्रयोगकर्ता को हाइलाइट यो त - सबै उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर।
यी "उजुरी" BlueScreen कोड रूपमा परिचित छन्। यी कोड विवरण सजिलै पाउन सकिन्छ। प्रत्येक कोड यो वा त्यो गल्ती लागि विशेष जिम्मेवार छ, र सिस्टम को इनकार को कारण। तपाईं विवरण को कोड भाषा बुझ्न भने, यो केही चिरपरिचित विकासकर्ताहरूले मंच, विशेषज्ञहरु प्रणाली त्रुटिहरू व्याख्या र कसरी यसलाई हटाउन मा सल्लाह कहाँ बारी राम्रो छ।
सबै पहिले नै प्रयास गरिएको छ भने, र "नीलो पर्दा" अझै पनि देखिन्छ, त्यसपछि पनि व्यक्तिगत कम्प्युटर र ल्याप्टप को मरम्मत को लागि सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुपर्छ।
सुविधा र आत्म-रिकभरी सिस्टम को nuances
तल ठेगाना बीएसओडी केही सिफारिसहरू हो:
तपाईं हालै भिडियो चालक अद्यावधिक भने, तपाईँले "फिर्ता रोल" आफ्नो वा पहिले मिति आफ्नो सिस्टम पुनर्स्थापना प्रयास गर्नुपर्छ। यो गर्न, स्वचालित लक सिस्टम नयाँ सफ्टवेयर स्थापना गर्दा कम्प्युटर विकल्प इंगित पुनर्स्थापना सेट।
BlueScreen (त्रुटि) किनभने प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड वा सञ्चालन स्मृति overclock गर्न प्रयास को हुन सक्छ - यी प्रक्रियाहरू रोकियो हुनुपर्छ।
यो समस्या खेल समयमा हुन्छ भने, तपाईं थ्रेसहोल्ड मा राख्न स्क्रिन संकल्प र ग्राफिक्स कम गर्न आवश्यक छ।
फाइल अपडेट गर्न प्रत्यक्ष आवश्यकता।
त्यहाँ एक "स्क्रिन मृत्युको" समस्या समाधान विभिन्न विधिहरू छन्। व्यवसायी जस्तै आधारभूत मापदण्डहरु गर्न सिस्टम लाभ "windose" पुनर्स्थापित वा मर्मत सेवा केन्द्र तपाईँको कम्प्युटरमा पठाउने रूपमा कट्टरपंथी उपाय, पूरा गर्न पालो तिनीहरूलाई हतार छैन, प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं।
यहाँ सञ्चालन प्रणाली पुन: प्राप्ति अर्को संस्करण।
को "नीलो पर्दा" प्रणाली माथि बुट गर्न अनुमति छैन भने, तपाईंले सुरक्षित पीसी मोडमा जानु पर्छ। , कम्प्युटर बुट समयमा यो प्रेस F8। कि पछि, कालो पर्दा बुट मेनु तपाईं हामी इच्छित मोड चयन गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ देखिनेछन्। सुरक्षित मोड सञ्जाल चालक को प्रयोग बिना लोड अन्य डाउनलोड विपरीत।
यो मोडमा, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटर भाइरसका लागि, स्क्यान BlueScreen - किनभने तिनीहरू पनि अक्सर घटनाको नाम प्रदर्शित देखि। यसो गर्न, तपाईं डेटाबेस को अद्यावधिक संस्करण संग एक एन्टिभाइरस प्रोग्राम प्रयोग गर्नुपर्छ।
पनि सुरक्षित मोडमा, तपाईँले reinstallation बिना प्रणाली ठीक गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, "प्रणाली पुनर्स्थापना" "windose", समारोह चयन गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् "ठीक" संग डिस्क घुसाउनुहोस्। पुरानो प्रणाली फाइलहरू यस चयन मार्फत मिट छन्, र व्यक्तिगत जानकारी हानि बिना नयाँ सेट।
एउटै मोडमा, तपाईँले चालक "फिर्ता रोल" गर्न सक्नुहुन्छ। गलत तरिकाले स्थापित चालक प्रणाली मा विफलता प्रभावित गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रोग्रामर को रहस्य
तपाईँको हार्ड ड्राइभमा ठाउँ खाली को कमी - त्यहाँ अर्को गोप्य को बीएसओडी को कारण, पर्दाफास छ। धेरै यो थाहा छैन, तर हार्ड डिस्क 15% भन्दा कम ठाउँ खाली छ भने, यो समस्या गराउँछ पनि अक्सर छ। यसलाई विशेष सफ्टवेयर वा प्रणाली नै प्रकार्य प्रयोग पुरानो र अनावश्यक फाइलहरू बाहिर सफा "हार्ड ड्राइभमा" ले आवश्यक छ।
केही motherboards मा, वहाँ एक विशेष बटन, जुन थिचिएको गर्दा सबै पछि स्थापना र सिस्टम अपग्रेड रिसेट प्रोसेसर, नजिकै स्थित छ। तसर्थ, एउटा विकल्प, तपाईँ कम्प्युटर एकाइ खोल्न र बटन कि हेर्न पर्छ। यदि, तपाईं, यो फाइदा लिनुपर्छ 15 यसको प्रारम्भिक अवस्थामा प्रणाली फर्कन हुनेछ जो सेकेन्ड लागि पकड।
बस कारण त्यहाँ एउटा शिलालेख BlueScreen (1049) त्रुटि थियो भन्ने तथ्यलाई आफ्नो टाउको समातेर छैन। कम्प्युटर प्रयोग आधारभूत ज्ञान भएको बेला कसरी, गृह मा "नीलो पर्दा" को समस्या समाधान गर्न, यो माथिको जानकारी बाट देख्न सकिन्छ। र पीसी पनि प्रारम्भिक छ निकटतम मर्मत केन्द्र सञ्चालन, यो "खसेको" धेरै भारी सुरक्षित र आफ्नो क्षमता र सक्षमता भरोसा दिनेछु जो सिस्टम आफै, पुनर्स्थापना प्रयास गर्न आवश्यक छ। र भने मात्र सबै विधिहरू परिणाम उत्पादन थिएन, कम्प्युटर सेवा प्रदान समावेश।
सिकारुहरूको लागि एक सरल विधि: कसरी Windows7मा एक सेवा मेटाउन
एक डिस्क पढ्नका लागि त्रुटि भयो: कसरी BIOS मार्फत ल्यापटप समाधान गर्न?
आइओएस 10: कसरी आईफोन 10 मा आइओएस स्थापना गर्न
तपाईं Windows 10 टिप्स प्रयोग गर्दै यदि कसरी, ब्याट्री जीवन विस्तार गर्न
कसरी आफ्नो जीवन मा राम्रो भाग्य र भाग्य आकर्षित गर्न
एयर सर्किट ब्रेकर: काम सिद्धान्त र लाभ
को कार्यालय - सहायक खण्ड, वा कम्पनी को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विभाग?
"Aliekspress" मा द्रुत सम्झौता: त्यो छ, जहाँ पाउन
बच्चा teething छ
बाथरूम मा तल्ला: विकल्प संग गलत हुन कसरी होइन?
कार्य मा VDV-बुद्धि। कसरी ड्रम अन्वेषण गर्न प्राप्त गर्न?
Elina Bystritskaya: जीवनी, परिवार र प्रसिद्ध अभिनेत्री को Filmography